Xeebaha ugu wanaagsan adduunka ee la booqdo hal jeer noloshaada | Safarka Absolut
Susana godoy | | Francia, Greece, Menorca, kuwa kale
Kuwa badan baa jira xeebaha ugu fiican adduunka taasi waxay inaga tagi kartaa iyadoo afkeenu furan yahay. Fagaarayaal wacdaro leh, midabbo cajaa'ib leh iyo waxaas oo dhan, oo ay ku hareereysan yihiin dabiicadda iyo meel wanaagsan. In kasta oo markaan ka fikirno waxaas oo dhan, waxaan u janjeedhnaa inaanu xoogga saarno oo keliya qayb adduunka ka mid ah.
Laakiin maanta waxaan arki doonnaa sida meeraha oo dhan aan ugu haysanno wax badan geesaha mudan in la baaro. xeebaha ugu fiican adduunka ayaa naga farxin doona wax kasta oo aan u baahanahay si aan ugu raaxeysano fasax si fiican ugu qalmay. Haddii aad raadineyso xoogaa nasasho iyo qurux ah, markaa halkan ayaad ka heli doontaa. Imisa ayaad ahayd?
1 Xeebta Matemwe ee Tansaaniya
2 Xeebaha ugu fiican adduunka, Sarakiniko oo ku taal jasiiradda Milo
3 Xeebta Ölüdeniz ee dalka Turkiga
4 Cala Macarelleta oo ku taal Menorca
5 Xeebta Palolem ee Hindiya
7 Xeebta Benagil ee Boortaqiiska
8 Xeebta Palombaggia ee Faransiiska
9 Xeebta Stiniva ee Croatia
Xeebta Matemwe ee Tansaaniya
Xeebtaan laga hadlayo waa mid ka mid ah xeebaha ugu wanaagsan adduunka. Waxaa laga yaabaa inay tahay sababta oo ah waa tan ugu dheer gobolkeeda, Zanzibar. In kasta oo ay waliba dhici karto maxaa yeelay waa ku wareegsan geedo timireed oo taxane ah taasi waxay umuuqataa inay ilaalineyso aagga kore halka ciidda wanaagsan ay ka bilaabaneyso. Waa xeeb xasilloon oo laga saaro nooc ka mid ah cilladaha, hirarku badanaa way kacaan waxayna daboolaan inta badan quruxda xeebtaan. Waxay leedahay lagoon iyo reef reef, sidaa darteed quusitaanka ayaa ka muhiimsan lagama maarmaanka.
Xeebaha ugu fiican adduunka, Sarakiniko oo ku taal jasiiradda Milo
Waxaan tagnaa Griiga halkaasoo aan sidoo kale ka helno mid kale oo ka mid ah yaababkii weynaa ee qaab xeebeed ah. Ayaa laga helay qaybta woqooyi ee jasiiradda Milo. Waxaa jira dad badan oo isbarbar dhiga meeshan iyo janno dayax, sababa la mid ah awgood. Waa wax xitaa ka sii qurux badan, haddii ay suurtagal tahay. Waxay leedahay dhagaxyo foolkaane ah oo siiya laftaas dabeecadda cad. Sidaa darteed, waxay noqotay mid ka mid ah soojiidashada weyn.
Xeebta Ölüdeniz ee dalka Turkiga
Xeebta galbeed ee Turkiga, waxaan ka helaynaa xeebtaan. Mid ka mid ah jawharadii waaweynaa ee Badda Aegean iyo inay sidoo kale ka mid tahay jagooyinka ugu sarreeya xeebaha ugu fiican adduunka. Dabeecadda iyo badduba waxay isugu yimaadaan deegaan gaar ah oo in ka badan kaamil ah oo ciid wanaagsan leh. Midabada iyo dabeecadda ayaa caddeyn fiican u ah inaan wajaheyno meel ku habboon. Xeebtu waxay leedahay laba qaybood, midka isku xira badda iyo waxa loogu yeero Blue Lagoon. Kaliya adigoo fiirinaya sawirka, waxay horeyba noogu sheegaysaa in kabadan erey kasta!
Cala Macarelleta oo ku taal Menorca
Hagaag, waxaan sidoo kale aadeynaa Menorca si aan ugala hadalno mid ka mid ah xeebaha ugu fiican adduunka. Waa cid kale oo aan ahayn Cala Macarelleta. In kasta oo aan sifiican u ognahay in aan sidoo kale hayno magacyo kale oo caan ah oo aysan jirin wax ay ku xaasidaan. Xaaladdan oo kale, damacii su'aashu ka taagnayd waxay leedahay biyo buluug ah oo turquoise ah iyo ciid aad u fiican. Marka waxay sidoo kale noo ogolaaneysaa inaan ku raaxeysano mid ka mid ah kuwa ugu jawiga wanaagsan. In kasta oo uu cabbirkiisu yar yahay, haddana uusan ahayn qurux. Haddii aad maalin ku qaadan doontid aaggan, xusuusnow inaad keento biyo kugu filan iyo sidoo kale cunto fudud.
Xeebta Palolem ee Hindiya
Xaaladdan oo kale, waxaan ku wajahan nahay xeeb leh qaab bilaha. Kaliya hal kiiloomitir iyo badh ayaa ah waxa nooga tagaya meel wanaagsan oo na geyn doonta Hindiya. Gaar ahaan gobolka Goa. Intooda badan waxaa ku xira dhagaxyo. In kastoo in yar ka hor aan xasilloonaa, natiijada ka mid ahaanshaha filimka, "The Bourne Myth", ayaa qaatay qadarin dheeraad ah.
Way seegi kari waayeen Tahiti iyo jasiiradeeda, gaar ahaan Bora Bora. Aragtida weyn waxay noo ogolaaneysaa inaan ku raaxeysano jawi buluug ah oo buluug ah oo cagtiisa, ciidda si fiican u nastay Waxay sidoo kale u soo jiidataa jardiinooyinkeeda qaab-kuleylaha ah iyo hirarkeeda ay jecel yihiin ku-xigeennada. In kasta oo ay jiraan inbadan oo xeebahan ah oo gaar loo leeyahay, had iyo jeer waxaa jira gees ah oo naloo oggol yahay inaan ku raaxeysanno jawi aad u wanaagsan.
Xeebta Benagil ee Boortaqiiska
Waxaad dhihi kartaa kiiskan, waxaan wajaheynaa xeeb qarsoon. In kasta oo aysan sidaa ahayn, maadaama ay jiraan dalxiisayaal badan ay sanad walba qaabisho. Xaqiiqdu waxay tahay inay leedahay nooc saqaf ah oo aan ka ahayn godadka. Wax ka dhigaya mid aad uga sii cajaa'ib badan sidii horeba waa. Waa Xeebta Algar de Benagil waxaa laga helay Burtuqiiska Algarve. In kasta oo ay godadku u muuqdaan inay daboolayaan, ma yeelaan, maaddaama ay leedahay godad ay qorraxda ka dhigayso jidkeeda. Inta lagu jiro saacadaha dhexe ee maalinta, waxaad ka arki kartaa dhammaan quruxdeeda.
Xeebta Palombaggia ee Faransiiska
Waxaan tagnaa Faransiiska, Corsica. Meel sidoo kale leh ereyo fara badan maxaa yeelay markaan aragno uun baa ku filnaan doonnaa. Waqooyiga Corsica, waxaan helnaa buuro dhagax adag leh. Laakiin durba aaggeeda koofureed, waxaan arki doonaa sida ciidda iyo xasilloonida baddu isugu soo dhowaadaan jawi ku habboon. Palombaggia wuu dhow yahay Porto Vecchio taas oo waliba caan ku ah. Laakiin haddii aan diiradda saarno xeebta su'aasha laga hadlayo, waa in la yiraahdaa iyadoo ku xiran iftiinka, dhowr midab sida buluug, cagaar ama xitaa casaan waa la kala sooci karaa.
Xeebta Stiniva ee Croatia
In kasta oo ay jiraan inbadan oo kale, waan sii wadaynaa wicitaanka Xeebta Stiniva ee Croatia. Waxaan sidoo kale ka hadleynaa xeeb xoogaa qarsoon oo u dhexeeya dhagaxyada. Xitaa sidaas oo ay tahay, waa mid ka mid ah meelaha ugu booqashada badan, oo ay ku hareeraysan yihiin muuqaallo aan la daadin iyo biyo gebi ahaanba iska cad. Ayaa diidi kara iyaga? Xaaladdan oo kale waa bakhayl su'aal laga qabo oo dhererkiisu yahay 30 mitir oo ku yaal koonfurta meesha caanka ah Jasiiradda Vis. Waxay leedahay marin marin adag, waddo cidhiidhi ah awgeed. In kasta oo dooni aanad wax dhibaato ah la kulmi doonin oo ay aad ugu qalanto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Xeebaha ugu fiican adduunka
Dabaqyada ugu wanaagsan ee Barcelona